ASA FANDEFASAM-BOLA AMIN’NY FINDAY : Voatery miantoka ny volabe lasan’ny jiolahy ireo tompon’ny tsena
Amin’izao fotoana izao dia betsaka ireo mponina eto an-drenivohitra no mivelona amin’ny fanaovana itony “taxi-phone” itony na koa ireny “kioska” fandefasana vola amin’ny alalan’ny finday ireny. 12 juillet 2017
Orinasan-tserasera telo lehibe no iarahan’ireo olona mivelona amin’ny fandefasana vola na mivelona amin’ny antso na taxiphone miasa amin’izany dia ny Orange, Telma ary ny Airtel. Tsy ny eto an-drenivohitra irery anefa no misitraka tombontsoa amin’izany fa ny any amin’ny Faritra hafa ifandraisana ihany koa.
Tena mampifandray ny fiaraha-monina tanteraka ny fisiany ary toa tsapa fa tsy afaka amin’ny fikirakirana azy intsony ny Malagasy hatreto. Saika isaky ny kihon-dalana no ahitana ireny fandefasana vola sy taxi-phone eto an-toerana, ka mibaribary fa isany manampy ny mpiara-belona ny fisiany. Mamorona asa ho an’ireo izay tsy mahita atao ohatra ny fanaovana ny “taxi-phone”. Manamafy ireo olona mivelona amin’izany fa ”mahavita ny sakafon’izy ireo isan’andro ny tombony azo na dia hita ihany aza fa somary kelikely izany”. Ho an’ireo mpanao irony “kioska” fandefasana vola lehibe irony kosa dia nilaza izy ireo fa “ zato isan-jato ny tombony azo amin’ny fifandefasana vola saingy ny atahorana matetika dia ny tsy fandriam-pahalemana ankehitriny ».
Nandritra ny fakàna ny hevitr’ireo olona mifototra amin’izany asa izany dia betsaka ireo milaza fa afaka ivelomana tsara ny fandefasam- bola ary misy mihitsy ny manizingizina fa “ tsy te-hiova asa intsony fa hijanona amin’izay asa izay hatrany”. Na ireo mpanjifa koa aza dia manambara fa “manampy betsaka eo amin’ny fiainana ny fandrosoan’ireo fifandraisan-davitra, ka sarotra ho an’ny rehetra ny hiala amin’ny fampiasana azy”. Olona vitsivitsy no mijoro vavolombelona momba izany an-drenivohitra.
Rivo 35 taona, mpanjifa fahana matetika : « Ho ahy manokana dia sahirana tanteraka aho raha tsy mividy fahana isan’andro satria ny asa aman-draharahako dia miankina betsaka amin’ny fifampiantsoana amin’ireo mpiara-miasa manerana ny Faritra. Etsy andaniny koa ny fandefasam-bola ho karaman’ireo mpiasa ao amin’ny orinasa sahaniko ».
Silvia 30 taona, mpivarotra amina kioska lehibe iray eto an-drenivohitra :
« Tena mahavelona anay mianakavy kely hatramin’izao ity asa fandefasana vola ity. Efa ho telo taona mahery izay no nilomanosako tao anatin’izany. Marihiko fa mananotena aho ary efa ho roa taona izay, ka tsy maintsy io no atao anton’asa hamelomana ny zanako telo mianadahy. Azo lazaina ho mandeha tsara aloha hatreto ny asa eto amin’ny faritr’Ambodivona saingy ny mampanahy hatrany dia ireo mpanafika sao ho tonga handroba no tena hatahorana ».
Vony 24 taona, mpivarotra fahana amoron-dalana :
« Noho ny fahasarotan’ny fiainana ankehitriny dia aleoko mihinana kely toy izay mandry fotsy. Afaka manamarina ny tenako fa mba mahita sakafo hohanina isan’andro aloha aho na dia kely aza ny tombony raisina amin’ny vidin’ny fahana. Marihina fa vao herintaona monja izay no nivarotako fahana teto Mahavoky Besarety.
Afaka manamarina sy sahy manamafy ireo mponina fa tsy afa-miala amin’ny fikirakirana azy ankehitriny satria « manamora fiainana tokoa ny fisiany eto amintsika”. Ireo olona mifanalavitra ohatra dia afaka mifanampy ara-dalàna amin’ny alalan’ny fandefasana vola haingana ary voaray eo no ho eo ihany izany. Sehatra iray ahafahan’ny tsirairay miserasera ihany koa ny fampiasana ny finday, ka maro ireo olona no mandany vola amin’ny fividianana fahana. Noho ireo asa aman-draharaha ohatra dia tsy maintsy ilaina izany, ka voatery manjifa ireo mila azy maika. Tovovavy iray antsoina hoe Sabrina 23 taona, mpianatra ho mpampivelona dia nanamafy ny tombontsoa azony amin’ny fampiasana ny finday.
« Manampy ahy betsaka ny fandefasana vola amin’ny alalan’ny finday satria vetivety dia tonga ara-potoana aty amiko ny vola tokony hilaiko avy any amin’ny ray aman-dreny ary azo antoka koa ny fandefasana azy. Ho an’ny fianarako eto Antananarivo izao dia mila vola matetika aho ka tsy maintsy mandefa vola ireo ray aman-dreny satria lavitra ahy. Amin’ny fifandraisana an-telefaonina indray dia mandany eo amin’ny arivo Ariary isan’andro ny tenako hiantsoana ireo fianakaviako, indrindra fa ny olon-tiako ».
Manoloana ny tsy fandriam-pahalemana
Fantatra àry fa mponina maro eto Antananarivo no miaina amin’ny fandefasam-bola amin’ny finday sy fanaovana “taxi-phone” ity ary samy milaza ny tombontsoa azony amin’ny fampiasany izany. Ny olana atrehin’izy ireo ankehitriny anefa dia ny tsy fandriam-pahalemana. Raha ho an’ny eto an-drenivohitra manokana dia efa maromaro ireo “kioska” voatafika ary misy mihitsy ny namoy ny ainy vokatry ny fitifirana ataon’ireo jiolahy. Toa mandry andriran’antsy ireo mivelona amin’ity asa ity satria na hita aza fa mahavelona fianakaviana maro ny fanaovana azy dia matahotra mafy amin’ny fitrangan’ny fanafihana misesisesy izy ireo. Vao tsy ela akory fa tamin’ny 5 mey lasa teo dia kioska lehibe teny Ankatso no voatafika. Maty voatifitr’ireo olon-dratsy tamin’izany ilay lehilahy tompon’ny tsena nanenjika azy ireo. Vola mitentina roa tapitrisa Ariary no lasa tamin’izany, ka tafatsoaka ireo jiolahy miisa dimy taorian’izay. Ireo trano fandefasam-bola no tena lasibatry ny jiolahy noho ireo mpivarotra fahana eny amoron-dalana. Ny antony dia betsaka ireo mpanafika no mahalala fa an-tapitrisany ny vola mihodina amin’izy ireny. Raha ny filazan’ ireo mpivarotra voaroba manoloana ny tsy fandriam-pahalemana amin’izao fotoana izao dia tsy maintsy manolo ny vola very izy ireo satria ny volan’olona no tena mifamezivezy ao anatin’izany. Izany hoe miaina ao anatin’ny tebiteby ireo olona manao antom-pivelomana amin’ity asa ity na dia eo aza ny firoborobony ankehitriny.
Fisorohana ny tsy fandriam-pahalemana
Raha ny zava-misy eto an-drenivohitra mahakasika ny fandrobana itony “kioska” itony dia tokony samy ho mailo avokoa ireo mifototra amin’izany. Tsy ho voasakana mihitsy mantsy ireo olona manana saina ratsy. Ireo trano na toerana fandefasam-bola mihitsy no mila hatsaraina sy hamafisina mba hanara-penitra ka tsy ho mora amin’ireo jiolahy ny mandrava izany. Faharoa manaraka izay dia mila hajain’ireo kioska rehetra ny ora tokony hisokafana sy ny firavana mba hisorohana ny fanafihana tampoka. Matetika mantsy dia ireo mpivarotra mirava hariva be no voaroba eto an-drenivohitra. Mba tsy hampiahiahy ireo mpivarotra ihany koa dia anisany fepetra mahomby ny tsy fametrahana volabe an-tapitrisany ao amin’ny toeram-piasany.
Nangonin’ i Tatiana